Nendlela Jabulela DVD movie ne Samsung Galaxy Note 8.0
Lena okokufundisa eligcwele ukufundisa indlela ukuguqula DVD disc movie kuya Galaxy Note 8.0 ukuze ukujabulela intandokazi DVD movie yakho kalula ekuhambeni. Lapho sakwazi a Galaxy Note 8.0, Uzothola lesi-8 intshi tablet Android kusuka Samsung izici 1,280 x 800-pixel TFT screen, amandla yi-a QUAD-core 1.6GHz iprosesa. It angakunika yona wena ukujabulela ahlukene ukubukela amabhayisikobho.
Nokho, uma ufuna ukujabulela DVD yakho movie nalo, wena ecasukile lami ngoba DVD ayisekelwe by Galaxy Note 8.0. Uma ufuna ukudlala DVD movie nalo, udinga ukuguqula DVD ukuze Galaxy Note 8.0 asekelwa video format. Ngokusho website esemthethweni, Galaxy Note 8.0 izisekelo MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 njll. video format / codec. Ngakho ungasebenzisa Isiqophi Converter Ultimate ukuguqula DVD disc kuya MP4 video for Galaxy Note 8.0. Video Converter Ultimate iyithuluzi elinamandla ukukusiza aguqula DVD noma ividiyo ku-video nge amafomethi ezahlukene.
Thwebula Isiqophi Converter Ultimate lapha uyifake
Manje, lungiselela ozithandayo DVD movie disc yakho, abese ake uqale lolu mhlahlandlela.
Step 1, ukungenisa DVD movie
Faka ozithandayo DVD disc yakho zibe DVD-ROM yekhompyutha yakho, abese uchofoze "Umthwalo DVD"Inkinobho ukungenisa umthombo wakho DVD kulo hlelo. Ungase futhi ukungenisa ISO amafayela image DVD & DVD amafolda kuwo.
Step 2, Khetha yohlelo thekelisa
Chofoza lokukhipha Ifomethi bese ukhetha format ofuna ohlwini olukumabhekezansi. Ngokusho the Galaxy Note 8.0 asekelwa video format, ungakhetha "MP4 Imiqophi"Njengoba inani video format. Ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukuguqula ividiyo 2D kuya 3D lapha ngokukhetha 3D okuphumayo format ngaphansi 3D video section.
Step 3, Qala kuguqukela DVD ukuze Galaxy Note 8.0
Manje, mane uchofoze the “Ukuguqula” inkinobho ukuqala inqubo ukuguqulwa. Bese asonge izandla ujabulele esanda bekhululiwe umculo movie amafayela akho. Once ukuguqulwa ucedzela, thola amafayela akho kokuqendwa ngokuchofoza inkinobho Ifolda Open ezansi iphaneli bese uxhuma Galaxy Note yakho 8.0, idlulisele video ibe kukho.
Posted on Februwari 25, 2013 May 9, 2015 Umbhali Izigaba Isixazululo Blu-ray/DVDAmathegi convert DVD to galaxy note 8.0, download dvd to galaxy note 8.0, DVD to Galaxy note 8, Galaxy Note 8.0 dvd converter
Langaphambilini post Previous: Indlela ukujabulela DVD movie ne HTC One mahhala
Next post Next: Easiest Way to Enjoy DVD Movie with Samsung Galaxy S4